कहिले खुल्ला रेलको घुम्टो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कहिले खुल्ला रेलको घुम्टो ?
कहिले खुल्ला रेलको घुम्टो ?
पुस ४ गते, २०७७ - ०९:१६
जनकपुरधाम। धुमधामले स्वागत गरेर गत असोजमा भित्र्याइएका रेल सेट त्यसै थन्क्याएर राखिएपछि जनकपुरवासीमा निराशा छाएको छ । जनकपुर–जयनगरका लागि ल्याइएका रेल सेट सरकारले कहिले चलाउँछ भन्नेमा अन्योल छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – प्रदेश २ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले बिहीबार ओली सरकारको हस्तक्षेपका कारण रेल महिनौदेखि थन्किएको स्टाटस सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए । कर्मचारी भर्तीको जिम्मेवारी प्र्रदेश सरकार लोक सेवा आयोगलाई दिन पनि उनले सुझाए । उनको आरोप थियो, ‘ओली सरकारले कार्यकर्ता भर्ती गर्न रेल सञ्चालनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ ।’
रेल सञ्चालन गर्न नसकेको सबै दोष उनले संघीय सरकारको थाप्लोमका राखिदिए । रेलको जनकपुर प्लेटफर्ममा रहेका कार्यालय अचेल सुनसान देखिन्छ । रेल कहिले सञ्चालनमा आउने ? यसको जवाफ जनकपुरस्थित कार्यालयका कर्मचारीसँग छैन ।
भारत सरकारले जयनगर–जनकपुर र कुर्था खण्डको ३५ किलोमिटर रेलको ब्रोडगेज लिंक, प्लेटफर्म र स्टेसनको निर्माण सकेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । सरकारले आफ्नै लगानीमा दुई सेट रेल खरिद गरेपछि सो रुटमा रेल नियमित चल्नेमा सबै ढुक्क थिए ।
पुस ४ गते, २०७७ - ०९:१६ मा प्रकाशित